Galmudug oo ka hadashay gawaari xamuul looga shakiyay inay hub sidaan oo ku xayiran Cadaado | Jowhar Somali News Leader
Home WARARKA Galmudug oo ka hadashay gawaari xamuul looga shakiyay inay hub sidaan oo...
Maamulka Galmudug garabka Cadaado ayaa faah faahin ka bixiyay illaa lix gaari ah oo xamuul ah, kuwaasoo ciidamada amniga ku qabteen koontaroolka laga soo galo, waxaana gawaaridan looga shakiyay inay sidaan saanad hub ah.
Cumar Maxamed Guureeye oo dhowaan loo magacaabay wasiirka Madaxtooyada Garabka Cadaado ayaa sheegay in warar kala duwan ka soo baxayaan gawaaridan halka ay u socdeen, isagoo xusay in ciidamada amniga ay ka shakiyeen.
Waxaa uu sheegay in guddi baaritaan loo saaray, isla markaana guddigaas ka war sugayaan wixii warbixin uu keeno.
Sidoo kale waxaa uu xusay in gawaarida looga shakisan yahay inay sidaan saanad hub ah, isagoo xusay in aanay jirin illaa iyo hada cid kala soo xiriirtay gawaaridaas oo maalintii 3aad ku xaniban Cadaado.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya halka ay ku wajahan yihiin gawaarida, oo la sheegay inay ku socdaan Dhuusamareeb, balse darawalada gaadiidka ayaa u sheegay Ciidamada Amniga inay ku wajahan yihiin Muqdisho, kana yimaadeen Jabuuti, taasoo shaki badan keeneysa masaafada ay soo mareen iyo halka ay ku sii jeedaan.
Previous articleMareykanka oo sheegay in duqeyn cusub uu ka fuliyay Jubada Hoose
Next articleMaxkamadda Ciidamada oo xukun dil toogasho ku xukuntay labo askari oo horay u dilay askar kale